စျေးပေါသော SNCB ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ | တစ်ဦးကရထား Save
စျေးပေါသော SNCB ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ
နေအိမ် > စျေးပေါသော SNCB ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ
ဤတွင်သင်နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည် စျေးပေါ SNCB ရထားလက်မှတ်တွေ နှင့် SNCB ခရီးသွားစျေးနှုန်း နှင့်အားသာချက်များ.
ခေါင်းစဉ်များ: 1. ရထားအထူးများက SNCB
2. SNCB အကြောင်း 3. စျေးပေါသော SNCB ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု
4. SNCB လက်မှတ်တွေဘယ်လောက်ကျလဲ 5. SNCB ရထားစီးတာဘာကြောင့်ပိုကောင်းတာလဲ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ
6. ပထမနှင့်ဒုတိယအတန်းတို့၏ခြားနားချက်ကဘာလဲ? 7. SNCB ကြေးပေးသွင်းမှုရှိပါသလား
8. ဘယ်လောက်ကြာ SNCB ၏ထွက်ခွာမီ 9. SNCB မီးရထားအချိန်ဇယားကဘာလဲ
10. မည်သည့်ဘူတာများကို SNCB မှတာဝန်ယူသည် 11. SNCB မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အမျိုးသားရထားကုမ္ပဏီ, SNCB, တာဝန်ထမ်းဆောင် 244 နှစ်စဉ်ခရီးသည်သန်းသန်း.
နေ့တိုင်း, အမျိုးသားရထားကုမ္ပဏီယူ 61 ဘယ်လ်ဂျီယံအတွင်းလူနှင့်ဥရောပတစ်လွှား၎င်းတို့၏ ဦး တည်ရာကို.
ဘယ်လ်ဂျီယံအမျိုးသားရထားမီးရထားကုမ္ပဏီ, SNCB, ထူထောင်ခဲ့သည် 1926.
SNCB ကမ်းလှမ်းသည် ဘယ်လ်ဂျီယံအတွင်းရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်ဥရောပတစ်လွှား. လက်ျာလက်မှတ်နှင့်အတူ, သငျသညျအပေါငျးတို့သအကောင်းဆုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဥရောပမှာအားလပ်ရက်နေရာများ. လက်မှတ်အမျိုးအစားများနှင့်ကဒ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းအမျိုးအစားများနှင့်အတူ, SNCB သည်လူတိုင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်.
ရထားမကြာခဏဘရပ်ဆဲလ် – ဂျန့်မြို့မှာ, Antwerp – အသုံး, ဘရပ်ဆဲလ် – နမူရ်. သင်သည် SNCB ရထားဖြင့်ဥရောပရှိအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့လည်းသွားနိုင်သည်.
ကော်ပိုရေးရှင်းကိုဖြတ်ပြီး, နီးစပ်သူ 20,000 ရထားလမ်းနှင့်ဘတ်စ်ကားကွန်ယက်များတွင်အလုပ်လုပ်နေသော ၀ န်ထမ်းများကခရီးသည်များနေ့တိုင်းမိမိတို့၏နေရာသို့ဘေးကင်းစွာရောက်ရှိရန်သေချာစေသည်.
ကိုသွားပါ ရထား Homepage ကို Save လုပ်ပါ သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ဤဝစ်ဂျက်ကိုသုံးပါ SNCB အတွက်လက်မှတ်တွေရထားတယ်
– Train iPhone iOS App ကိုသိမ်းပါ
– Train Android App တစ်ခုကို Save လုပ်ပါ
ပြန်လာသည့်နေ့စွဲ (optional ကို)
စျေးပေါသော SNCB ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု
ဂဏန်း 1: သင်၏ SNCB လက်မှတ်များကိုတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်မှာထားပါ
စျေးနှုန်း SNCB ရထားလက်မှတ်တွေ ခရီးသွားသည့်နေ့နီးသည်နှင့်အမျှမြင့်တက်လာသည်. သင်၏ SNCB ရထားလက်မှတ်များကိုထွက်ခွာချိန်မှတတ်နိုင်သမျှအဝေးဆုံးကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်ငွေအနည်းငယ်စုဆောင်းနိုင်သည်. SNCB ရထားလက်မှတ်ကိုစောစောစီးစီးရနိုင်သည်3သို့6ရထားထွက်ခွာသွား၏လပေါင်းများစွာ. ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းကသင့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံး SNCB ရထားလက်မှတ်များကိုရရှိနိုင်ပါတယ်. သူတို့ကအစအရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်, ဒါကြောင့်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သင်အမိန့်, မင်းအတွက်စျေးသက်သာတယ်. SNCB ရထားလက်မှတ်တွင်ငွေစုရန်, သင်၏လက်မှတ်များကို ASAP ဝယ်ယူပါ.
ဂဏန်း 2: အထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်း SNCB မှခရီးသွားခြင်း
SNCB ရထားလက်မှတ်တွေကစျေးသက်သာတယ် အဆိုပါ Off- အထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်း, တစ်ပတ်၏အစမှာ, နှင့်နေ့အချိန်နာရီအတွင်း. သင်ရရန်သေချာပါသည် စျေးနှုန်းချိုသာရထားလက်မှတ်တွေ တစ်ပတ်အတွင်း. အင်္ဂါနေ့မှာ, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ကြာသပတေးနေ့, SNCB ရထားလက်မှတ်သည်စီးပွားရေးအရအများဆုံးဖြစ်သည်. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နံနက်ခင်းနှင့်ညနေခင်းများတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ခရီးသွားလာသောစီးပွားရေးသမားများကြောင့်ဖြစ်သည်, အဲဒီနာရီအတွင်းရထားလက်မှတ်တွေကပိုကုန်ကျတယ်. ဒါဟာနောက်နံနက်အကြားနှင့်ညနေခင်းအသွားအပြန်မတိုင်မီအချိန်မရွေးခရီးသွားရန်ဝေးစျေးနှုန်းချိုသာသည်. တနင်္ဂနွေသည်ရထားများအတွက်အခြားအထွတ်အထိပ်ကာလဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့များတွင်ဖြစ်သည်. SNCB ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများလည်းမြင့်တက်လာသည် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များနှင့်ကျောင်းပိတ်ရက်များ.
ဂဏန်း 3: သင်၏ခရီးစဉ်အချိန်ကိုသေချာစွာသိပါက SNCB အတွက်သင်၏လက်မှတ်များကိုမှာယူပါ
SNCB ရထား မြင့်မားသောဝယ်လိုအား၌ရှိကြ၏, နှင့်အနည်းငယ်သာယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူ, သူတို့ကလက်ရှိဘယ်လ်ဂျီယံရထားများအတွက်ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်. SNCB သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားမဟုတ်လျှင်လက်မှတ်လဲလှယ်ခြင်းကိုတားမြစ်သောသို့မဟုတ်ငွေပြန်အမ်းခြင်းကဲ့သို့ရထားလက်မှတ်ကန့်သတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။. သင်လက်မှတ်များကိုလူများအားရောင်းနိုင်သည့်ဖိုရမ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိနေသေးသော်လည်း, SNCB သည်လက်မှတ်ရောင်းအားကိုခွင့်မပြုပါ. ဒါကသင့်ကိုဘယ်လိုချွေတာမလဲ? သင်၏အချိန်ဇယားသေချာမှုရှိမှသာလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုနှစ်ခါကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းမှသက်သာရာရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာတစ်ခုခုပေါ်လာပြီးမူရင်းလက်မှတ်ကိုသင်မသုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။.
ဂဏန်း 4: သင်၏ SNCB လက်မှတ်များကို Save A Train တွင်ဝယ်ပါ
ရထားကိုသိမ်းဆည်းပါအကြီးဆုံးရှိသည်, အကောင်းဆုံး, နှင့်ဥရောပရထားလက်မှတ်များအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအပေးအယူ. မီးရထားအော်ပရေတာအများအပြားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး, ရထားလက်မှတ်အရင်းအမြစ်များ, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာ algorithms များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာက Save A Train ကိုစျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူမှုကိုပေးသည်. SNCB အတွက်ဈေးသက်သာတဲ့ရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူရုံသာမကပဲ; SNCB အတွက်အခြားနည်းလမ်းများအတွက်လည်းကျွန်ုပ်တို့အတူတူပင်ဖြစ်ပြီးရထားလမ်းဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူကြသည်.
ဘရပ်ဆဲလ်မှ Antwerp ရထားစျေးနှုန်းများ
အမ်စတာဒမ်မှ Antwerp ရထားစျေးနှုန်း
Lille မှ Antwerp ရထားစျေးနှုန်းများ
ပဲရစ်မှ Antwerp ရထားစျေးနှုန်း
ရထားခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက် SNCB လက်မှတ်သည်ယူရို ၂.၅ မှ ၂၀ အထိမြင့်သည်. အဆိုပါ SNCB ရထားလက်မှတ်၏စျေးနှုန်း သင်ဝယ်ယူသည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားနှင့်သင်ခရီးသွားရန်ရွေးချယ်သည့်အခါပေါ်တွင်မူတည်သည်:
စံ € 2,50 – € 15.00 € 15 – € ၃၀
ပထမတန်း € 10.50 – ယူရို ၂၀ € ၂၁ – € 46
SNCB ရထားစီးတာဘာကြောင့်ပိုကောင်းတာလဲ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ
1) သင်မြို့လယ်ခေါင်သို့ရောက်. ၎င်းသည်လေယာဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် SNCB ရထား၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. SNCB ရထားများနှင့် အားလုံးအခြားရထားခရီးသွားလာ ဘယ်နေရာမှာမဆိုထံမှ ဗဟိုမှမြို့ လာမယ့်မြို့၏. လေဆိပ်ကနေမြို့လယ်ခေါင်အထိအချိန်အတော်အသင့်သက်သာစေတယ်. ရထားမှတ်တိုင်များနှင့်အတူ, သင်သွားလိုသည့်မြို့၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလွယ်ကူစွာသွားနိုင်သည်. သင်မည်သည့်နေရာသို့သွားနေသည်ကိုအရေးမကြီးပါ, ဘရပ်ဆဲလ်, Antwerp, အသုံး, သို့မဟုတ် Liege, မြို့လယ်ခေါင်သည် SNCB ရထား၏အဓိကအားသာချက်ဖြစ်သည်!
2) လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးနှင်ရန်သင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်မတိုင်မီအနည်းဆုံးနာရီပေါင်းများစွာလေဆိပ်သို့ရောက်ရန်လိုအပ်သည်. လေယာဉ်ပေါ်မတက်ခင်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများကိုသင်လုပ်ရလိမ့်မည်. SNCB ရထားနှင့်အတူ, သင်ရုံထက်လျော့နည်းဘူတာရုံမှာဖြစ်ဖို့ရှိသည် 30 ကြိုတင်မိနစ်အနည်းငယ်. သင်အချိန်ကိုလည်းစဉ်းစားသောအခါလေဆိပ်ကနေမြို့လယ်ခေါင်သို့သွားရန်အချိန်ယူရသည်, သငျသညျ SNCB ရထား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ် စုစုပေါင်းခရီးသွားအချိန်.
3) မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ, SNCB မီးရထားလက်မှတ်များ၏စျေးနှုန်းသည်ဘတ်ဂျက်လေယာဉ်လက်မှတ်များထက်စျေးကြီးသည်. သို့သျောလညျး, သငျသညျပါဝင်ပတ်သက်အားလုံးစွဲချက်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, SNCB ရထားလက်မှတ်တွေမှာစျေးပိုကောင်းပါတယ်. ရထားစီးရန်မလိုသောခရီးဆောင်အိတ်များကဲ့သို့အခြားကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတူ, SNCB အားဖြင့်ခရီးသွားလာ သေချာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်.
4) ရထားတွေကပိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေတယ် သင်ရထားများနှင့်လေယာဉ်ပျံနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, ရထားထိပ်ပေါ်မှာထွက်လာလိမ့်မယ်. လေယာဉ်များသည်၎င်းတို့စွန့်လွှတ်လိုက်သောကာဗွန်ဓာတ်များနှင့်အတူလေထုကိုအကြီးအကျယ်ညစ်ညမ်းစေသည်. နှိုင်းယှဉ်ရထားအများကြီးထွက်ပေးပါ လျော့နည်းကာဗွန်ညစ်ညမ်းမှု လေယာဉ်ထက်.
ကွဲပြားခြားနားသောဘတ်ဂျက်နှင့်ခရီးသွားအမျိုးအစားများအတွက် SNCB လက်မှတ်အမျိုးအစားများကွဲပြားခြားနားသည်. ပထမတန်းနှင့်ဒုတိယတန်းအတွက်စံလက်မှတ်ကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်. ဥပမာအားဖြင့်, ဒုတိယလူတန်းစားသည်ခရီးရှည်အတွက်ပိုမိုသင့်တော်ပြီး၊ ဘတ်ဂျက်ခရီးသွားများအတွက်. သို့သော်သင်သည်သင်၏ခြေထောက်များဆန့်ရန်နေရာရှာနေလျှင်သို့မဟုတ်သင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် စီးပွားရေးသမား သင်ခရီးသွားစဉ်အလုပ်လုပ်လိုသည်, ထို့နောက် 1st class သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသားများအတွက်, subscriptions ကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, အဆိုပါ Unlimited ရာသီလက်မှတ်, နှင့်စံရာသီ. နိုင်ငံတကာအတွက်တော့အချိန်ကြာမြင့်စွာကြိုတင်ပြီး ၀ ယ်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်.
ကဒ်နှစ်မျိုးလုံးကို ၀ ယ်နိုင်ပါတယ်:
– SNCB လက်မှတ်ကောင်တာများ.
– SNCB အက်ပလီကေးရှင်း.
စံ SNCB လက်မှတ်များ:
ပုံမှန်လက်မှတ်သည် SNCB ကမ်းလှမ်းသောအပြောင်းလွယ်ဆုံးရထားလက်မှတ်ဖြစ်သည်. ထို့ကြောင့်, သင်ပုံမှန်ရထားလက်မှတ်နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားနိုင်ပါတယ်. သင်ပုံမှန်လက်မှတ်များအွန်လိုင်းဝယ်ယူကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်, ပြန်ပေးလို့မရပါ. သို့သျောလညျး, အစီအစဉ်များအတွက်ပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့လျှင်, သင်လက်မှတ်ကိုကောင်တာများမှငွေပြန်အမ်းနိုင်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုရနိုင်သည်, သင်၏ထွက်ခွာသည့်နေ့မတိုင်မီတစ်ရက်, ဒါမှမဟုတ် 30 သင်လက်မှတ်ဝယ်ယူပြီးမိနစ်အကြာ.
မိသားစု ၀ င်အားလုံး SNCB လက်မှတ်များကိုအထူးလျှော့စျေးခံစားနိုင်သည်. ဥပမာ, ကလေးများအောက် 12 အခမဲ့ခရီးသွားလာ, နှင့်အထိ 50% ကျော်လူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက်စံလက်မှတ်တွေပေါ်မှာ 12. ထို့အပြင်, ဒီလက်မှတ်နှင့်အတူ, သင် SNCB ရထားအားလုံးမှာသွားလာနိုင်ပါတယ်.
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသားများသည်စံရာသီလက်မှတ်ကိုဝယ်ယူနိုင်သည်, နှင့်တူညီသောလမ်းကြောင်းအတွက်န့်အသတ်ခရီးစဉ်ခံစားပါ. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, ၏စျေးနှုန်းအဘို့ 10 လစဉ်ကြေး, သူတို့နှစ် ဦး စလုံးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံး၌သူတို့ဆန္ဒရှိသကဲ့သို့သွားလာနိုင်သည်.
Weekend လက်မှတ်သည်သောကြာနေ့ - တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သည်, နှင့် 50% ဘယ်လ်ဂျီယံရှိမည်သည့် ဦး တည်ရာကိုမဆိုလျှော့စျေး. ဒါကြောင့်, စ7သောကြာနေ့ည, ဘယ်လ်ဂျီယံကိုဖြတ်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားနိုင်တယ်, 1st သို့မဟုတ် 2nd အတန်းထဲတွင်. ဖြည့်စွက်ကာ, ဤအထူးအသုံးအနှုန်းများသည်အထိတိုးချဲ့ အများပြည်သူပိတ်ရက် အဖြစ်ကောင်းစွာ.
ဘရပ်ဆဲလ်မှ Ghent ရထားစျေးနှုန်းများ
Antwerp မှ Ghent ရထားစျေးနှုန်းများ
Halle မှ Ghent ရထားစျေးနှုန်းများ
Ghent ရထားစျေးနှုန်းများမှ Bruges
ဘယ်လောက်ကြာ SNCB ၏ထွက်ခွာမီ?
တိကျစွာတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူး, သို့သော် Save A Train သည်သင်ရောက်ရှိရန်အကြံပေးသည် 30 သင်၏ထွက်ခွာချိန်မတိုင်မီမိနစ်ပိုင်း. ဒီအချိန်ဘောင်နှင့်အတူ, သင်လိုအပ်သည့်အရာများအတွက်လည်းစျေး ၀ ယ်ရန်အချိန်လုံလုံလောက်လောက်ရလိမ့်မည် သင့်ရထားခရီးစဉ်ကိုသွားပါ တတ်နိုင်သမျှအဆင်ပြေ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာရှိအချိန်နှင့်တပြေးညီရှာဖွေနိုင်သည် တစ်ဦးကရထား Save SNCB ရထားအချိန်ဇယား, သင်၏လက်ရှိတည်နေရာနှင့်လိုချင်သောနေရာကိုသာရိုက်ထည့်ပါ, ငါတို့သည်သင်တို့သတင်းအချက်အလက်ကိုပြသလိမ့်မယ်.
Dinant ရထားစျေးနှုန်းများမှ Antwerp
Dinant ရထားစျေးနှုန်းမှ Ghent
Dinant ရထားစျေးနှုန်းသို့ Liege
မည်သည့်ဘူတာများကို SNCB မှတာဝန်ယူသည်?
SNCB ၏ဘရပ်ဆဲလ်ဘူတာသည်ဘရပ်ဆဲလ်ဖြစ်သည် – ဗဟို, အရာဘယ်လ်ဂျီယံ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်တည်ရှိသည်.
နောက်ထပ် SNCB ဘူတာသည် Antwerp တွင်ရှိသည်, SNCB ရထား ထွက်ခွာခြင်းနှင့် Antwerp ဗဟိုဘူတာမှရောက်ရှိလာ, လှပသောအပြာရောင် Astrid ဟိုတယ်နှင့်နီးသည်. Antwerp Central သည် ဒုတိယအလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာ ဘယ်လ်ဂျီယံမှာ.
SNCB ရထားများက Ghent မှထွက်ခွာသည် Ghent စိန့် Pieters ဘူတာရုံ, ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်တတိယအကြီးဆုံးမြို့နှင့်ဖလန်းဒါးစ်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်.
Liege, Liege Guillemins သည် SNCB ၏ဗဟိုမီးရထားဘူတာရုံဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, Liege ဘူတာသည်ဘယ်လ်ဂျီယံကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်, ၎င်းသည် Wallonia ရှိအလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာတစ်ခုဖြစ်သည်. ထို့အပြင်, သင်ဂျာမနီကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, ပြင်သစ်, လူဇင်ဘတ်, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လ်ဂျီယံကနေနယ်သာလန်, သင့်၏ SNCB ရထားလက်မှတ်များကိုကြိုတင်မှာထားသင့်ပါသည်.
အသုံး (Brugge – အခြားလူကြိုက်များသောဘာသာစကားဖြင့်တူညီသောမြို့နာမည်) ရထားလမ်းသည်ဖလန်းဒါးစ်ရှိနောက်ထပ်အလုပ်များသော SNCB ရထားဘူတာဖြစ်သည်. ဥပမာ, Bruges မှ, သင့်ရထားလက်မှတ်ကိုအခြားသို့မှာယူနိုင်သည် လူကြိုက်များနေရာများ ဘယ်လ်ဂျီယံမှာ: ဂျန့်မြို့မှာ, Antwerp, နှင့်တစ်နာရီထက်လျော့နည်းအတွက်ဘရပ်ဆဲလ်. အဆိုပါ Bruges ရထားဘူတာရုံတစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 20 ကနေမိနစ်လမ်းလျှောက်အကွာအဝေး မြို့လယ်ခေါင်, နှင့်လှပသောဟောငျးစီးတီး Markt စတုရန်း.
Leuven ရှိ SNCB ဘူတာရုံ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိ Flemish Brabant ဒေသရှိမီးရထားဘူတာရုံဖြစ်သည်. ဤသည်အလုပ်များရထားဘူတာရုံသည်အခြားဒေသများနှင့်အတူ Flemish ဒေသနှင့်ဆက်သွယ်နှင့်ထိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်5ဘယ်လ်ဂျီယံရှိအလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာ. ထို့ကြောင့်, သင်လုပ်နိုင်သည် မီးရထားခရီးသွားလာ ဘရပ်ဆဲလ်မှ, ဘရပ်ဆဲလ်လေဆိပ်, Leuven, Antwerp, နှင့်အခြေခံအားဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိမည်သည့်မြို့.
Mechelen သို့မဟုတ် Malinas, Mechelen မြို့မှာ, ထို့အပြင်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိ SNCB ရထားဘူတာတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်ဒီမှာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် 10 ပလက်ဖောင်း, Intercity ရထားလိုင်းများအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်, Antwerp ကနေဘရပ်ဆဲလ်လေဆိပ်အပါအ ၀ င်. ဖြည့်စွက်ကာ, သင်သည်သင်၏ SNCB လက်မှတ်များကိုအမ်စတာဒမ်သို့ ၀ ယ်နိုင်သည်, နှင့်လူဇင်ဘတ်, Antwerp နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်မှတစ်ဆင့်.
စက်ဘီးစီးခွင့် SNCB ရထားများ?
SNCB ရထားများပေါ်တွင်စက်ဘီးစီးခွင့်ပြုသည်. သင်ခေါက်နိုင်သောစက်ဘီးရှိပါက, ထို့နောက်သင်ရထားသို့တက်နိုင်သည်, အခမဲ့ဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, အခြားစက်ဘီးအမျိုးအစားများသည်သင့်ရထားလက်မှတ်အတွက်ယူရို ၄ ဖြည့်စွက်ခြင်းကိုကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်.
ကလေးများ SNCB ရထားများပေါ်တွင်အခမဲ့ခရီးသွားပါစေ?
ဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့်သာအချို့သောအသက်အရွယ်အထိ. အသက်အရွယ်ထက်ငယ်သောကလေးများ 12 အရွယ်ရောက်ပြီးသူခရီးသည်နှင့်လိုက်ပါသွားသည့်အခါအခမဲ့ခရီးသွားမည်.
ဟုတ်ကဲ့, မင်းရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုရထားပေါ်ခေါ်သွားလို့ရပြီ, ခရီးစဉ်နှုန်း€3သည်. သို့သျောလညျး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်ခဲသို့မဟုတ်အိတ်တစ်လုံးတွင်ရှိသင့်သည်, ဒါမှမဟုတ်တောင်းတ.
အချို့သောဘူတာများတွင်ရထား၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုဖော်ပြသောအီလက်ထရောနစ်ပြသမှုများရှိသည်. နောက်ထပ်, ရထားလာသောအခါရထားနည်းပြအရေအတွက်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိကြောင်းဇုန်များစစ်ဆေးရန်၎င်းကိုသုံးပါ.
အများဆုံးတောင်းဆိုထားသော SNCB မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ – SNCB တွင်ထိုင်ခုံကြိုတင်မှာထားရမလား?
သငျသညျ လုပ်နိုင် အရံ တစ်ဦး ငါသိတယ်တွင် ကြိုတင်ပြီး ပြည်တွင်းအပေါ် SNCB ရထား. သငျသညျ လိမ့်မည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတစ်ခုရယူပါ ထိုင်ခုံ ကြိုတင်မှာကြားထားအောင်ပြီးနောက်, ဒါပေမယ့်ဒီမဖြစ်မနေမဟုတ်ပါဘူး.
အဘယ်သူမျှမ. မရှိ အခမဲ့ ဝိုင်ဖိုင် SNCB ရထားပေါ်တွင်အင်တာနက်. SNCB မီးရထားဘူတာများတွင်အခမဲ့ Wi-Fi ကိုသင်ခံစားနိုင်သည်.
သင်ဤအချက်မှဖတ်ပြီးပါပြီ, သင်၏ SNCB ရထားများအကြောင်းသိထားရန်လိုအပ်ပြီးသင် SNCB ရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ တစ်ဦးကရထား Save.
NSB Vy နော်ဝေး SBB ဆွစ်ဇာလန်
ဤစာမျက်နှာကိုသင်၏ဆိုဒ်သို့ embed လုပ်ချင်ပါသလား? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sncb%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း), ဒါမှမဟုတ်ဒီစာမျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်.
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml / fr သို့ / nl or / es နှင့်အခြားဘာသာစကားများကိုသင်ပြောင်းနိုင်သည်.